Murgaa irraa wanta itti galcha. Yoo barbaadde, uunkaalee fi gabaasaawwan ukaankaa xiqqaa dabalatee faayila kuusdeetaa tokkoorraa garan kan birootti galchuu dandeessa.
Gara jala foddaa kuusdeetaa irraa galfata hunda ukaankaa xiqqaa dabalatee fila.
Foddaa iddoo itti gabatee, gaafata, unka, ykn gabaasa filaman bana.
Wanta filame lama moggasa. Kuusdeetaa irratti hundaa'uun, maqaan tokko tokko, arfiileen, fi dheerinni maqaa kan hin danda'amne ta'uu danda'a.
Wanta filame iddoo dhuma itti kuufamee keessaa bana.
Akka Mul'annootti Uumii
Gaafata filame gara mul'annootti jijjiira. Gaafatni inni jalqabaa faayila kuusdeetaa kee keessatti hafa fi mul'annoon dabalataa kaadhima kuusdeetaa irratti uumama. Kuusdeetaatti mul'annoo dabaluuf heeyyama barreessuu qabaachuu qabda.
Kuusdeetaa baay'een gaafatatti fayyadamee gingilcha ykn gabateewwan kuusdeetaa tartiiba qabsiisee kompitara kee irratti kuusawwan agarsiisu.Mul'annoon akkuma gaafataa dalagaa walfakkaatu kenna,garuu gara kaadhimaatiin.
Gabatee, gaafata, ykn mul'annoo filamanUnka Masakaa jalqabsiisu
Gabatee, gaafata, ykn mul'annoo filaman Masaka Gabaasaa jalqabsiisu.
Baafata xiqqaa bana.
Qaaqa amaloota kuusdeetaa bana.
Gosa Walindhaa Masakaa bana.
Qaaqa Amaloota Addaa bana.